China ifilimu yePET yeZinto eziMnyama ezi-Blue Dichroic Iridescent yomzi mveliso wokusetyenziswa kunye nabenzi | Yasebukhosini
Ukuveliswa kweMveliso yefilimu engama-26 ye-micron iridescent
Ifilimu yoqobo yeDichroic ikwabizwa ngokuba yifilimu emibalabala, ifilimu eqaqambileyo, ifilimu emnandi, ifilimu yomnyama we-laser. Ohluke ngokupheleleyo kumbala bhanyabhanya weplastiki osetyenziselwa ukushicilela umbala kunye nokudaya, luhlobo lwefilimu edityanisiweyo yeplastikhi enyibilikayo kwaye ikhuphe ii-resins zesalathiso sokuphinda kabini okanye nangaphezulu kwaye emva koko yongeze ukuya kuthi ga kwi-100 yamanqanaba kwaye umaleko ngamnye ziinanometer ezilikhulu kuphela .
Ukucaciswa kweMveliso yefilimu engama-26 micron iridescent
26 iMicron Dichroic Iridescent Umnyama Ifilimu
Izinto eziphathekayo I-PET Ukusetyenziswa Umhombiso, ukupakisha, njl
Ukutyeba 26u Ubungakanani bokupakisha I-106 x 35 x 35cm (eqhelekileyo)
Umbala luhlaza Gross ubunzima / roll I-84Kgs (eziqhelekileyo)
Ubude 100m, 500m, 1000m, 3000m (eyenziwe ngokwezifiso) Uhlobo lwefilimu Ipholiyesta
Imveliso kunye neApplication yeDichroic Iridescent Ifilimu
Ifilimu ye-Dichroic Iridescent ingaphantsi kwe-30 micron, kodwa iqulethe ngaphezulu kwe-120 yeelayimitha ezimbini okanye nangaphezulu ezahlukeneyo, ezi zahlula-hlula ngemibala yesibane xa ukukhanya kuboniswa kwifilimu. Imibala eqwalaselweyo iyahluka njengoko umntu etshintsha i-engile yokujonga. .
(1) Ukukhazimla, Umsonto wentsimbi ishishini
(2) imveliso iphepha
(3) imboni yokupakisha ukutya
(4) imboni yeplastiki
(5) Ishishini lamalaphu
(6) Ukupakisha kunye nokuhombisa
Iinkcukacha zeMveliso zeDichroic Iridescent Film
Imveliso yesiQinisekiso seFilimu yeDichroic Iridescent
Ukupakisha kunye nokuhambisa ngefilimu ye-Dichroic Iridescent
1, ndingafumana njani a isampulu?
Isampulu yasimahla inokuthunyelwa kuwe emva kokuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe, kwaye kuya kufuneka ukogquma kuphela iindleko zokuchaza.
2, Kuthekani ngexesha lokuhambisa?
Njengomgaqo ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku zomsebenzi ezili-10-15 emva kwentlawulo.
3, Kuthekani ngentelekelelo yeendleko?
Kwiiyure ezingama-24 emva kokufumana uphando lwakho, olusekwe kuzo zonke iinkcukacha ezibandakanyiweyo, njengobungakanani, umbala, ubungakanani, isicelo esikhethekileyo njl.
4. Ndazi njani ukuba ndingathemba uku-odolwa kuwe?
Siye seshishini ukusukela ngo-2008 kwaye sizibophelele ekufumaneni eyona nkonzo.
5. Ngaba wena nako ukuya ukuvelisa yethu uyilo, ubukhulu kwaye imibala?
Ngokuqinisekileyo. Kuyanceda ngokwenene ukuba unoluvo oluqaqambileyo lwezinto ozifunayo.
Yintoni iglasi yedichroic？
Iglasi yeDichroic yiglasi ebonisa imibala emibini eyahlukileyo ngokutshintsha umbala kwiimeko ezithile zokukhanyisa.
Into enye yedichroic yigilasi yangoku engadibaniyo eveliswa ngokubeka ingqokelela yeglasi kunye nemicu emincinci yesinyithi okanye ioksidi enika iglasi yokutshintsha imibala ngokuxhomekeke kwikona yokujonga, ibangela uluhlu lwemibala ukuba iboniswe njenge Umzekelo we-optic-film optics. Iglasi esiphumo isetyenziselwa iinjongo zokuhombisa ezinje ngeglasi enamabala, ubucwebe kunye nezinye iindlela zobugcisa beglasi. Isihloko sentengiso se "dichroic" sinokubonisa imibala emithathu okanye nangaphezulu (itriki okanye iprochroic) kunye ne-iridescence kwezinye iimeko. Igama elithi dichroic lisetyenziswe ngokuchanekileyo xa kufakwa iilebhile zongenelelo kusetyenziso lweelebhu.
Enye into yeglasi ye-dichroic yaqala ukubonakala kwiziqwenga ezimbalwa zegilasi yamaRoma ukusuka kwinkulungwane ye-4 kwaye ineglasi eguqukayo equkethe igolide kunye nesilivere yamasuntswana asasazeke kwiglasi yeglasi ngendlela ethile ukuze iglasi ibe nepropathi yokubonisa umbala ogqithisiweyo kunye nombala owahluke ngokupheleleyo, njengobude bemitha ethile yokukhanya edlula okanye ibonakaliswe.  Kwiglasi yamandulo ye-dichroic, njengoko ibonwa kwisiqwenga esidumileyo, ikomityi ye-Lycurgus yenkulungwane ye-4 kwiMyuziyam yase-Bhritane, iglasi inombala oluhlaza xa ukhanyiswe ngaphambili ekukhanyeni okubonisiweyo, kunye nenye ebomvu, ebomvu ngaphakathi okanye emva kwendebe ukuze ukukhanya kudlule kwiglasi. Oku akubangelwa kukutshintsha kweefilimu ezincinci zentsimbi kodwa iicolloidal zesilivere kunye negolide esasazeke kuyo yonke iglasi, kwisiphumo esifana naleso sibonwa kwiglasi yegolide yeruby, nangona inombala omnye kuphela.
Egqithileyo Ifilimu yeBlaze Dichroic Iridescent yeFestile yeGlasi okanye yeAlicrylic
Okulandelayo: Ifilimu ye-0.2mm Dichroic Iridescent ye-PVC yeMagical Material yokuhombisa, uyilo lobugcisa kunye nemisebenzi yobugcisa
Ifilimu yePET Dichroic
Ifilimu ye-PET Dichroic
Ifilimu engatshintshiyo yePET Dichroic
I-Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Ifilimu ye ...